Candy Crush Soda Saga - Pipi Crush Game - Free Lives Tips Cheats Hints
Last updated on Chikunguru 20, 2021 By Isobella Franks Leave a Comment
Munhoroondo yose, kwave kune mafambiro mazhinji akauya akazopera mumhute yenguva. Zvisinei, kune vashoma vaive nehunhu hwakadaro zvekuti vakagara kupfuura nguva yavo yavaitarisira. Saizvozvowo, Candy Crush ndeimwe yeaya maitiro aitarisirwa kubva nekukurumidza sezvayakauya asi chinhu ndechekuti Candy Crush akaita zvimwe zvakasiyana mumutambo wavo.. Uniquely, havana kungounza matambudziko matsva uye nhanho yavo asiwo vakaunza shanduro itsva yemutambo senge Candy Crush Soda Saga.
Candy Crush Soda Saga ndiyo imwe yeshanduro dzakakurumbira, maererano nesarudzo dzepa internet, munhevedzano yeCandy Crush saga. Mutambo uyu unoratidzika kunge urikutevera maitiro akafanana zvakare seyenhevedzano yawo asi uchiisimudzira nekuwedzera twist yeSodas nemapipi pamwe chete..
Zvinangwa zvemutambo zvinoramba zvichichinja apo isu tinofambira mberi muzvikamu zvakasiyana uye mazinga emutambo.
Zvimwe zvikamu zvakakurumbira zveCandy kupwanya Soda level sanganisira:
Soda level: iyi ndiyo inonyanya kukosha mhando yezinga raunongobatanidza 3 kana mamwe marudzi eSodas kuunza Soda pamusoro.
Frosting level: iwe unovhura iyi nhanho pamwero 6. Munhanho iyi, haufanirwe kungobatanidza zvihwitsi pamwe chete asi zvakare unofanirwa kutyora mazaya echando kuunza Soda pamusoro.
Bubble level: Mune iyi nhanho iwe haufanirwe chete kuunza mapere kune tambo, pamusoro, asi iwe zvakare unofanirwa kuwedzera mazinga eSoda pabhodhi.
Chocolate level: sezviri pachena nezita rayo iyo chocolate level ine chokoreti pasina mubvunzo mairi. Iwe unofanirwa kumisa kupararira kwemachokoreti ari kukurumidza kukura.
Huchi mwero: munhanho iyi, unofanira kushingirira, uchibvisa mapere kubva pasi pehuchi uchiziva izvi kuti huchi hunenge hunenge huri mumabhuroko hunoda kusvika pakucheneruka. 6 layers.
Mamwe maswiti akakosha anogona kukubatsira kubvisa iyo candy kupwanya Soda saga zviri nyore. Izvi zvakataurwa pasi apa
Zvihwitsi zvine mitsetse ndiyo yekutanga. Pamwe chete nekupa mapoinzi zvakare inokubatsira kujekesa mutsara wese. Chechipiri, pane zvihwitsi zvakaputirwa. Nekuenzanisa siwiti iyi, unobvisa mamwe zvihwitsi; kunyanya, 8 zvihwitsi izvo zvakatenderedza zvihwitsi zvakaputirwa. Chechitatu, kune macandi ehove ekuti kana iwe uchibatanidza maviri uye maviri mativi iwe unowana hove candies. Nekuda kweizvozvo hove idzi dzinodya rudzi rwechihwitsi dzakatenderedza bhodhi
Izvi hazvisi zvese. Kune mamwe macandi zvakare. Ivo vanokubatsira iwe mukuchenesa iwo mwero wechiwitsi kupwanya soda saga.
Kuoma kwedanho rega rega mu Candy Crush Soda Saga zvakasiyana. Zvisinei, paunenge uchifambira mberi kunetseka kuri kuwedzera. Pamwe chete, iwe unofanirwa kuve wakagadzirira kutarisana nedambudziko rakasiyana padanho rega rega.